Akpọpụrụ ndị njem nleta 137 Russia na Cuba mgbe ha nwalere ihe ọma maka COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Cuba » Akpọpụrụ ndị njem nleta 137 Russia na Cuba mgbe ha nwalere ihe ọma maka COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ na -agbasa Cuba • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Imirikiti ndị njem nlegharị anya Russia nọpụrụ iche maka ọrịa COVID-19 a na-enyo enyo na-egosi enweghị akara ọ bụla, ha kwukwara na ha gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na Russia tupu njem ha.
Ihe dị ka ndị ọbịa Russia 130 nwalere ihe dị mma na COVID-19 mgbe ha rutere Varadero, Cuba na June 30.
Na Sọnde, enwere akụkọ nke ihe karịrị ndị njem 150 dịpụrụ adịpụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ ụgbọ elu nwalere nke ọma maka COVID-19.
Dabere na onye nnọchi anya gọọmentị Russia na Havana, Cuba, ihe karịrị ndị njem nlegharị anya Russia 130 nọpụrụ iche n'ime ụlọ nkwari akụ ha maka ọrịa COVID-19 a na-enyo enyo.
“Ka ọ na-erule Julaị 4, mmadụ 127 si n'ụgbọ elu rutere na June 30 na Julaị 1 ka nọ na-anwale COVID-19 dị mma. Anyị na -atụ anya nsonaazụ nnwale ọzọ maka mmadụ 80 bịarutere na July 1. Maka ndị bịarutere na July 3, enwere mmadụ iri nwalere nke ọma, […]
Na mbụ, na Ndi Consulate General kọrọ na ihe dị ka mmadụ 130 nwalere ihe ziri ezi mgbe ha rutere Varadero na June 30, gụnyere ọtụtụ ndị ọrụ ụgbọ elu. Nnwale nnwale weghachitere nsonaazụ dị mma maka mmadụ 33. Enwere ule iri asatọ n'etiti ndị njem ụgbọ elu nke ọzọ.
O doro anya, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị njem na-anọpụ iche maka ọrịa COVID-19 a na-enyo enyo na-egosi enweghị akara ọ bụla, ha kwukwara na ha gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na Russia tupu njem ha. Ha nwekwara akwụkwọ nyocha PCR nke emere na Russia, nke na -egosikwa nsonaazụ adịghị mma.
Ka ọ na -erule mbido June, enwere ihe dị ka ụmụ amaala Russia 6,000 na ebe ntụrụndụ Cuba. Dịka iwu ndị Cuba siri kwuo, ndị njem nleta na-abata ga-enyocha PCR maka ọrịa COVID-19 n'ime awa 72 tupu njem ha. A ga -ewepụta akwụkwọ na -egosi nsonaazụ ule adịghị mma mgbe ị na -abanye n'ụgbọelu.